भारु सटहीमा अन्योल बढ्दै, सीमा क्षेत्रमा हजारको १३ सय
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालमा रहेका पाँच सय र एक हजार दरका भारु नोट सहटीको विषयमा ठोस निर्णय नगर्दा अरबौंका नोट खेर जाने सम्भावना बढेको छ । नेपालमा रहेका नोट फिर्ता..
बिजुली नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि मुलुकभरका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन
काठमाडौं । नियमितरुपमा विद्यत आपूर्ति हुन थालेपछि मुलुकभरका उद्योग आफ्नो क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन थालेका छन् । लोडसेडिङकै कारण क्षमता उपयोग अहिले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन थालेका हुन् । अहिले..
मोरङ । सीप भए न जात न धर्म । स्वदेशमा गर्न सकिन्छ पेसा कर्म । पैसा कमाउन विदेशै जानुपर्छ भन्ने सोचलाई गलत सावित गर्दै उर्लाबारी–४ का हेमन सिंह(लिम्बू)२२ वर्षयता सिलाइ..
​नेपाली बजारमा भारतीय टायरको वर्चश्व, गोरखकाली रबर उद्योग ब्युँताउने प्रयास
हरि लामिछाने काठमाडौं । स्वेदशमै उत्पादन गर्न सकिने अथाह सम्भावना रहँदा रहँदै टायरका लागि मुलुकबाट बर्सेनि ठूलो रकम बिदेसिने गरेको छ। सवारी साधनको वृद्धिसँगै मुलुकको टायरको बजार पनि विस्तारित भइरहेको छ। स्वदेशमा..
​सतहत्तर लाख राजस्व सङ्कलन
झापा । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालु आव २०७३-७४ को प्रथम चौमासिकमा रु ७७ लाख ६७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने १३ हजार १०० सवारी चालकलाई..
लोडसेडिङ घटाउन भारतकै भर पर्नुपर्ने, राष्ट्रिय उत्पादन कम
काठमाडौं । आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्तको अवस्थामा कायम राखिराख्न पनि भारतमै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले भारतबाट २ सय ५०..
काठमाडौं । रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा समस्या पर्ने भन्दै तत्काल विकल्पको बारेमा सोच्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको ‘रेमिट्यान्स घट्दा..
​३१ करोड लागतमा चोभारमा फलफूल र फूलको थोक बिक्री केन्द्र निर्माण हुने
काठमाडौं । विश्व बैंकको ३१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लागतमा आगामी १३ महिनाभित्र कीर्तिपुर नगरपालिका– १४ मा फलफूल र फूल सङ्कलन केन्द्रको निर्माण गरिने भएको छ । केन्द्रमा ३० मेट्रिक टन..
भारतीय नोट प्रतिबन्धले निर्यात घट्यो
काठमाडौं । भारत सरकारले आफ्ना ठूला दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा भारी गिरावट आएको छ । नेपालबाट चिया, अलैँची, अदुवा लगायतका कृषि उत्पादन ठूलो परिमाणमा भारत निर्यात हुँदै..
स्वामित्व परिवर्तनका ४ वर्षपछि हिमाल हाइड्रोलाई १६ करोड कर तोकियो
काठमाडौं । स्वामित्व परिवर्तन भएको चार वर्षपछि हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनलाई १६ करोड रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय कर कार्यालय गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को..
काठमाडौं । काठमाडौंबाट लामो दूरीको उडानका लागि नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गर्न लागेको दुइटा वाइड–बडी ९ठूलो अकारको० एयरबस विमान दिलाउन ११ वटा प्रस्ताव परेका छन् । सरकार स्वामित्वको निगमको..
​आयल निगममा कर्मचारी नहुँदा उपत्यकामा पेट्रोल हाहाकार
काठमाडौं । तिहारको विदामा नेपाल आयल निगमले मागअनुसार पेट्रोल वितरण नगर्दा बजारमा अभाव चर्किएको छ । राजधानी लगायत आसपासका क्षेत्रका पेट्रोल पम्पहरु अधिकांशमा अहिले ‘पेट्रोल छैन’ भन्ने बोर्ड राखिएको छ..
फूलमा कहिलेदेखि आत्मनिर्भर हुनेछ देश ?
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत फूल उत्पादन हुने गरे पनि यस वर्षको तिहारका लागि गत वर्षभन्दा ५० हजार बढी फूलको माला आयात गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष..
​सफा टेम्पो अब लमजुङमा पनि
लमजुङ । जिल्लामा पहिलो पटक व्यावसायिक सफा टेम्पो सञ्चालनमा आएको छ । नगरवासीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सदरमुकाम बेसीसहरमा सफा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बेसीसहरका केही व्यवसायीले सफा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याएका..
नेपाली यार्सागुम्बाको मुख्य बजार चीन र हङकङ
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन तथा संकलन हुने हिमाली जडिबुटी यार्सागुम्बाको मुख्य बजार उत्तरी छिमेकी चिन रहेको देखिएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्वन केन्द्रका अनुसार मुलुकबाट हुने कुल निकासीमध्ये ९३..
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित माथिल्लो मर्स्याङदी ‘ए’आयोजनाबाट उत्पादित विजुली खरिद नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिरणले आफ्नै आयोजना मध्यमस्र्याङ्दीको उत्पादन रोकेर खरिद गर्ने भएको छ । माथिल्लो मर्स्याङदीको विद्युत..
काठमाडौं । व्यापारिक प्रायोजनको लागि निर्माण गरिएका भवनहरुले सरकारलाई नियमित कर नतिरेको पाइएको छ । काठमाडौंका एक दर्जनभन्दा बढी व्यापारिक मलहरुले नियमित रुपमा कर नतिरेको पाइएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन..
काठमाडौं । भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट आगामी ५ वर्षका लागि इन्धन आयात गर्ने सम्झौताका लागि नेपाल आयल निगमले तयारी थालेको छ । सम्झौतामा गृहकार्यका लागि निगमको ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल मंगलबार मुम्बई जाँदै..
‘बाजेको मसला’ बजारमा
काठमाडौं । चाडपर्वहरु नजिकिँदै गर्दा बाजेको सेकुवाले २३ प्रकारका मसला बजारमा बिक्री सुरु गरेको छ। ४० वर्षदेखि नेपाली स्वादको सेकुवा तथा खाना पस्कँदै आएको बाजेको सेकुवाले मसलाको पनि व्यवसाय थालेको..
१२ अपार्टमेन्ट मात्र बस्नको लागि स्विकृत
काठमाडौं । राजधानीमा निर्माण भइ सञ्चालनमा आएका मध्ये १२ वटा अपार्टमेन्टले बस्नका लागि योग्य रहेको अनुमति पाएका छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ती..
​ग्यासको मूल्य ५० रुपैयाँ घट्यो, अबदेखि मुल्य स्वचालित हुने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ घटाएको छ । बिहीबारराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य लागू हुनेछ । अब एउटा ग्यास सिलिन्डर..
​एक हजार व्यवसायीले दैलोमै बुझाए आयकर
फलेवास । हजारौँ रुपैयाँ खर्चेर आयकर बुझाउन पोखरा जान बाध्य पर्वतका व्यवसायीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लामा नै आयकर बुझाउने सुविधाबाट दुई दिनमा यहाँ झन्डै एक हजार २७ व्यवसायीले आयकर बुझाएका..
जनरल स्टोरमा सिलबन्दी, २७ ओटा सार्वजनिक यातायात कारबाहीमा
काठमाडौं । सञ्चालन भएको लामो समय हुँदासमेत व्यवसाय नवीकरण नगरेको भन्दै कलङ्कीमा जैसवाल जनरल स्टोर सिलबन्दी गरिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको सक्रियतामा भएको अनुगमनका क्रममा..
​साना व्यवसायीलाई भन्दा विचौलियालाई कारबाही गर्नुपर्‍यो, सानालाई कारवाही गरेर केही हुँदैन
काठमाडौँ । साना व्यवसायीलाई भन्दा विचौलीयालाई अनुगमन र कारबाही गर्न व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । चाडबाडको समय नजिक आएपछि सरकारले साना व्यापारीलाई अनुगमन तीव्र पारेको भन्दै भन्सार र विचौलियाले नै..
नेपालका बजारमा डलरको हाहाकार
काठमाडौं । बूढानीलकन्ठकी उषा खड्काले डलर साट्न सोमबार दिनभर बैंक चाहरिन् । तर, उनले आफूले चाहेको जति डलर पाउन सकिनन् । भिसा लागेको पार्सपोर्ट बोकेर एकैदिन चारवटा बेंक भौतारिएको उनी दिउँसो..
नेपाली एयरबसको ककपीटमा लेजर आक्रमण
काठमाडौं । गत शुक्रबार बैंककबाट फर्किंदै गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस ए–३२० विमान काठमाडौं भित्र छिरीसकेको थियो । साँझको बेला अध्यारो उपत्यकाभित्र आइसकेको जहाज ठैंचु नाघेर हात्तिवन माथीको आकासमा थियो..
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क-कस्को लाइन काट्यो ?
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएका ग्राहकको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनबमोजिम पहिलो चरणमा महसुल नबुझाउने ठूला ग्राहकको..
​नाकाबन्दीले गर्दा पाउडर दूध नयाँ, प्याकिङ ब्याग मात्रै पुरानो - डिडिसी
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी)ले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको बालाजुमा रिलेभलिङ गरिएको भनिएका पाउडर दूधको उपभोग म्याद ननाघेको दावी गरेको छ । संस्थानले एक विज्ञप्ति जारी गरेर पाउडर दूधको बोरा..
नेपालमा हवाई इन्धन तीन गुणा महँगो, मूल्य कुन देशमा कति ?
काठमाडौं । सरकारको चर्को कर र नेपाल आयल निगमले अत्यधिक नाफा राखेका कारण नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढी भएको भन्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले घटाउनका लागि सरकार गुहारेको छ..
​युनिलिभर नेपालले सेयरधनीलाई १०२० प्रतिशत नगद लाभांस दिने
काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनी ​युनिलिभर नेपालले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १०२० प्रतिशत नगद लाभांस दिने घोषणा गरेको छ । जसअनुसार युनिलिभरको एक कित्ता सेयर भएका सेयरधनीले १०२० रुपैयाँ नगद लाभांस पाउने भएका..
Results 889: You are at page 12 of 30